တွတ်ပီနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ခါတော်မီ လုပ်စားကြတဲ့ အတုတွေအားလုံးကို ဒေါသထွက်နေတဲ့ ရေမွန့်မိခင် ဒေါ်ခင်မြတ်မွန် – Update News
တွတ်ပီနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ခါတော်မီ လုပ်စားကြတဲ့ အတုတွေအားလုံးကို ဒေါသထွက်နေတဲ့ ရေမွန့်မိခင် ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်
“တွတ်ပီနဲ့ပတ်သက်သမျှ ခါတော်မီလုပ်စားနေကြတဲ့အတု တွေအားလုံးကို အံ့ဩခြင်းကြီးစွာနဲ့ ဒေါသထွက်ရတဲ့” ရေမွန်၏ မိခင်ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်-
ကိုယ့်အိမ်က တွတ်ပီအခန်းလေးထဲမှာတော့.. တွတ်ပီရဲ့အရာရာဟာ နေရာတကာပြန့်ကျဲနေတာ သူ့အခန်းထဲဝင်လိုက်တိုင်း ရင်ဘတ်တွေအောင့်တက်၊မျက်ရည်တွေပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျလာတတ်လို့ တတ်နိုင်သလောက်မဝင်ဘူး
ဒါပေမဲ့ ဒီတိုင်းထားလို့လဲ မရတော့ ဖုံတွေသဲတွေဝင်ရှင်း၊ ဘီဒိုထဲကမှိုတက်စပြုလာတဲ့ လျှော်ပြီးသားအဝတ်အစားတွေ ပြန်လျှော်မီးပူတိုက်၊ပ ရုပ်လုံးလှိုင်လှိုင်ထည့်ပြီးအမြတ်တနိုး သိမ်းဆည်းခဲ့တာ.
တန်ဖိုးကြီး၊ဈေးကြီးလို့ သိမ်းတာမဟုတ်ဘဲ သူသုံးခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပါ. သူရောက်သွားချိန်က နေသေဆုံးချိန်ထိ စွဲစွဲမြဲမြဲ သုံးခဲ့တာလေးတွေဆို ပိုတန်ဖိုးထားတယ်. ရန်ကုန်မှာခေတ်ကောင်းစဉ် Cele ကြီးဘယ်တော့မှ သုံးစွဲဖို့ စိတ်မကူးပေမဲ့
ဟိုမှာ ငွေကြေးအခြေအနေအရ သေဆုံးချိန်ထိသုံးခဲ့တဲ့ အပေါစား ခေါင်းအုံး အပေအတူးအစုတ်လေး သူအမြဲခြုံခဲ့တဲ့စောင်အနွမ်းလေး၊ အပေါစား shower cream ဘူးခွံလေးရွှံ့တွေ ပေပွနေတဲ့ဝတ်စုံ၊‌
မိုးရေတွေစိုရွှဲနေတဲ့ Towel Big Cele မို့အိမ်မှာအကောင်းစား ဖိနပ်တွေအောတိုက်နေတာတောင် တစ်ရံမှသယ်မသွားဘဲ နောက်ဆုံးချိန်ထိ စီးခဲ့တဲ့ခွေးကိုက်ထားလို့သဲကြိုးပြတ်ကာ နီးဖေါ့ဖိနပ်တစ်ရံ၊နိုင်ငံကျော် Cele ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန် ငွေသုံးသောင်းတောင်မပြည့်တော့တဲ့ မှိုတက်နေတဲ့ Wallet လေး..
အဲ့ဒါတွေအားလုံး ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေထက်ပိုမိုတန်ဖိုးထား၊အဖိုးမဖြတ်နိုင်လို့အသေအချာထုတ်ပိုး ဂရုစိုက်သိမ်းဆည်းခဲ့တယ်
ကျန် သူ့အမှတ်တယတွေကိုနီးစပ်သလို လှူခဲ့တယ် ပေးခဲ့တယ်.လက်ခံရရှိသူတွေအသိဆုံးပါ တစ်ခါမျှ ရောင်းစားဖို့မကြံစည်ခဲ့ဖူးပါ.မိသားစုကရင်ကွဲပြီး ခံစားနေရချိန်.. တွတ်ပီကို ဘယ်လိုချစ်တာ ဘယ်လောက်လွမ်းတာလို့ တွင်တွင်ပြောပြီး..
တွတ်ပီနဲ့ပတ်သက်သမျှ ခါတော်မီလုပ်စားကိုင်စားနေကြတဲ့အတု တွေအားလုံးကို အံ့ဩခြင်းကြီးစွာနဲ့ ဒေါသထွက်ပါတယ် စက်ဆုတ်ပါတယ်တစ်နည်းနည်းနဲ့ တွတ်ပီ သိခဲ့ရင်လဲအတော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပါ.
ခေတ်ကြပ်ကြီးထဲမှာ လူတိုင်းစားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေမနေကြပါဘူး ကိုယ်တွေသားအမိလဲ Online မှာဈေးရောင်းစားနေကြရတာပါ. စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေတာ Reason ပေးပြီး တွတ်ပီကိုခုတုံးလုပ် အသုံးမချကြပါနဲ့ငတ်နေရင်အကျိုးကြောင်း ပြောပြီးလာတောင်းကြပါ.
လှူဒါန်းပေးကမ်းပါ့မယ်. တစ်ခုသိထားကြဖို့က.. တွတ်ပီဟာ သူယုံကြည်ရာလမ်းကို‌ လျှောက်လှမ်းနေရင်း အနေဆင်းရဲအစားဆင်းရဲ၊အစာ ငတ်တဲ့ဒဏ်အကြောင်းပြုပြီး သေဆုံးသွားရတယ်ဆိုတာ ပါဘဲ… ငတ်နေတယ်လို့ အသက်ရှင်နေသေးသူတွေကသိပ်မငြီးတွားကြပါနဲ့အသက်ပေးသွားသူကို အားနာကြပါဦး!!!